China Best Price New igbe Transformer Professional Transformers Box Set N'ogbe emepụta na suppliers |Shengte
Ọnụ ahịa kacha mma Igbe ọhụrụ Transformer Professional Transformers Box Set N'ogbe
A. Obere size, kọmpat Ọdịdị, na-ebi n'ógbè nke nanị banyere 1 / 3-1 / 5 nke otu ikike nke igbe igbe Europe, nke zuru oke, mkpuchi mkpuchi zuru oke, enweghị mkpuchi mkpuchi, nchekwa nchekwa na ntụkwasị obi na-arụ ọrụ ntụgharị dị mma, iji obere ọnwụ.
B. Pịnye S11 transformer nwere obere mkpọtụ na ike ibufe ikike.A na-ekewa ngwaahịa ahụ n'ime akụkụ atọ: nnukwu ụlọ elu voltaji, ụlọ obere voltaji na transformer.A na-ahazikarị ya n'ụdị "ngwaahịa".Enwere ike iji akụkụ voltaji dị elu na netwọk akaghị aka na njedebe na ụdị V-ụdị ma ọ bụ T-ụdị ihe ngbanwe na nchedo fuse abụọ.Ụdị ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe na ntụkwasị obi.
C. Ụlọ nrụgide dị elu na-eji mita mmanụ-mmiri, mita mgbaàmà mmanụ, ihe nrịbama nrụgide, valvụ ntọhapụ nrụgide, valvụ mgbapụta mmanụ na ihe ndị ọzọ iji nyochaa ọrụ nke mgbanwe.
D. Igwe ọkụ ọkụ dị elu na-anabata plọg eriri ma nwee ike ịnwe ihe njide zinc oxide iji gboo ihe dị iche iche chọrọ nri obere voltaji.Enwere ike ịgbakwunye mita obere voltaji na shunting dịka ihe onye ọrụ chọrọ.
E. Transformer na-eji nku corrugated na-ekpo ọkụ ọkụ.Mgbe usoro ọgwụgwọ pụrụ iche gasịrị, ọ nwere ikike mgbochi corrosion siri ike na ụdị dị iche iche na nhazi.Enwere ike ịhọrọ efere ígwè nkịtị na igwe anaghị agba nchara.
Ngwanrọ ejikọtara (American Box Transformer)
Nlereanya Akara ikike (KVA) Ogo nchikota voltaji Nọmba otu njikọ Ọnwụ enweghị ibu (w) Mfu ibu (W) Enweghị ibu ugbu a (%) Ihe mgbochi sekit dị mkpụmkpụ (%) Nha ndepụta
Voltaji dị elu (KV) Oke nkesa (%) Obere voltaji (KV) Ogologo * obosara * ịdị elu (mm)
Mara: Ụdị ngwaahịa, nha na ịdị arọ bụ data maka oge ụfọdụ, nke nwere ike ịgbanwe n'ihi nkwalite nhazi.
Nke gara aga: Ọnụ ahịa n'ùkwù ngbanwe ụzọ atọ - ọdụ ụgbọ ala jikọtara ọnụ - Shengte
Osote: Kachasị mma KYN28A-12 Ime Metal Armored Pullout Switchgear Supplier
mgbanwe ụdị euro
Ụdị ngbanwe nke America
OEM jikọtara Transformer Electric igbe Ụdị Tr ...
Ụlọ ọrụ arụrụ arụrụ n'ọkụ eletrik dị elu...